ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို ၂ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရလိုက်ပြန်တဲ့..မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာ – ရှအေလငျး
ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမလေးရေ . . .
ယနေ့ ည Ivory Coast 🇨🇮 နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော Cote d’ivoire International 2019 နိုင်ငံတကာကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်🇲🇲 ကြက်တောင်လက်ရွေးစင်သက်ထားသူဇာ က
Mauritius နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို 21-15 14-21 21-19 ၂ပွဲပြတ်အနိုင်ရသွားပြီဖြစ်ကြောင်းယခုနောက်ဆုံးသိရပါတယ်။၂၀၂၀ တိုကျို ကမ္ဘာ့ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ ၁၀၀ % သေချာသွားပါပြီ။
We are Myanmar 🇲🇲 (y)
ဂုဏျယူပါတယျ ညီမလေးရေ . . .
ယနညေ့ Ivory Coast 🇨🇮 နိုငျငံတှငျကငျြးပသော Cote d’ivoire International 2019 နိုငျငံတကာကွကျတောငျပွိုငျပှဲမှာမွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ🇲🇲 ကွကျတောငျလကျရှေးစငျသကျထားသူဇာ က
Mauritius နိုငျငံလကျရှေးစငျကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၈၉ ရှိနံမညျကွီးကွကျတောငျကစားသမား Kate Foo Kune ကို 21-15 14-21 21-19 ၂ပှဲပွတျအနိုငျရသှားပွီဖွဈကွောငျးယခုနောကျဆုံးသိရပါတယျ။၂၀၂၀ တိုကြို ကမ်ဘာ့အိုလံပဈပွိုငျပှဲဝငျရောကျခှငျ့ရဖို့ ၁၀၀ % သခြောသှားပါပွီ။
ကျေးဇူးရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံသို့ ကြွရောက်ပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူ
ဒိန်းပိုပိုဒေါင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဒိန်းဒေါင်ကို အပြစ်တင်လိုက်တဲ့ ခင်လှိုင်
ညောင်လေးပင်က ..အဲဒီဆရာဝန်အကြောင်း… ပြောချင်လာတာ လျှာယားနေပြီဗျာ..
ဘုရင်ကိုတောင် မတူမတန်ဘူး လက်မထပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းလိုက်တဲ့ ရွာတစ်ရွာက...
တို့​ဆေးမိပြီး အမြန်ရေယာဉ်ပေါ် ပါလာတဲ့ မိန်းကလေးငယ်ကို မိဘများထံ ပြန်လည်အပ်နှံ..